Kudzidza Kubva Kurambana Nezvekuva Mubereki | Bezzia
Kudzidza kubva pakurambana nezvekuva mubereki
Maria Jose Roldan | | Vanamai, Zvemwanakomana wako
Kuenda kuburikidza nekurambana kunogona kuva chimwe chezviitiko zvinoshungurudza zvikuru chero munhu zvaangave nazvo. Kune varume kunyanya, pane rutsigiro shoma rwuripo uye varume vazhinji vanonzwa vasina hunhu kana vakatsvaga rubatsiro. Vanogona kunzwa sekuti havana wekutungamira kana kubatsirwa. Vabereki vazhinji vakarambana vanofunga kuti vamwe vari kuzviramba, dzimwe nguva vamwe vanogona kufunga kuti kana amai vakasiya baba, "zvichave zvechimwe chinhu." Pasina kupokana, iwo marongero asina kutsigirwa ayo anogona kuva anorwadza zvikuru.
1 Nguva yakasurukirwa
2 Kusiyiwa kwevarume kuriko zvakare
Mukurambana amai pavanosiya mhuri uye ndibaba vanochengeta vana, zvinogona kuvhiringidza vazhinji. Panogona kutanga kuve nemibvunzo isina kugadzikana iyo, zvikasadaro, vanaamai havabvunzwe nekuti ivo vanofanirwa kuziva kuzviita "zvakanaka". Nguva inotevera paunosangana nemurume ari kurambana, unogona kufunga kuti anonzwa kusurukirwa, kusurukirwa, uye kusava netariro, kunyangwe akataridzika zvakanaka achizviramba.
Baba vanochengeta vana vavo vanofanirwa kusangana nematambudziko epamoyo, emari uye epanyama nenzira imwecheteyo sekunge vanga vari amai vanosara vega vachiona vana vavo nekuti baba vanovasiya.
Kusiyiwa kwevarume kuriko zvakare
Murume anosiiwa nemukadzi wake anogona kunzwa kusurukirwa, kunyadziswa, matambudziko emari, nezvimwe. Vanonzwa kusurukirwa, kusurukirwa uye kusavimba nemunhu. Vanoziva vanofanira kurwira vana vavo asi vanogona kuzvibvunza mibvunzo inorwadza: Ndiri munhu akaipa kudaro here? Ndichazombokwanisa here kuda mumwe munhu? Pane chero munhu anoda kuti ndive nevana uye ndive ndega?
Chaizvoizvo varume vakarambana vanogona kubatsirana semapoka ekutsigira. Vanogona kuve rubatsiro sevabereki, kuziva nyaya dzevamwe vanhu uye kuyedza kuvabatsira kunatsiridza manzwiro ako pamusoro pako.
Varume vanodawo kuratidza kusununguka pane zvakaitika kwavari, vanodawo kuva nemunhu wekutaura naye uye wekuvimba naye. Kuziva kuti kune vamwe varume vakave vakapfuura nechinhu chimwe chete uye kuti zvakare kune matambudziko emanzwiro nemutemo uye zvipingaidzo muhupenyu. Varume vakarambana vanodawo kunzwisisa nekutsigirwa.
Naizvozvo, kana iwe uchiziva murume akasiyiwa nemukadzi wake kana kuti ari kuenda kunorambana, usafunge kuti ari kunzwa zvakanaka kana kuti ari kurarama imwe pwere. Nekuti haina kudaro. Unogona kunzwa kusurukirwa uye kutopererwa. Izvo zvakare zvinoita kuti iye akurambe iwe ... asi edza kufungidzira zvaungaita kana zvaungati kumukadzi ari kupfuura nenzira imwecheteyo nemurume iyeye, nekuti anodawo mhando imwechete yerubatsiro, rudo , kutarisisa nekusimbisa.
Zvakaoma zvikuru kutora pamusoro pekurambana, kurambana, kana kusiiwa. Kuva nekutarisana nemanzwiro anorwadza akadaro uye zvakare kurera vana nekuvimbika kuti vafambise mberi uye kuti avo manzwiro akaenzana, hazvisi nyore. Naizvozvo, kana iwe uchiziva nyaya yemumwe munhu mune ino mamiriro, usazeze kuvapa ruoko pavanenge vachirida, Vanozokutendai nehupenyu!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Kudzidza kubva pakurambana nezvekuva mubereki
Mhoro. Zvinofadza sei kuverenga ichi chinyorwa. Ndinoda kugovera mabhuku nezvazvo. Ndiri kushanda neangu thesis kuti chaizvo nyaya ndeyekuti zvakakosha sei kuti umupewo rutsigiro rwemweya uye izvo zvinogonesa manzwiro ake. Ndapedza tenzi wangu zvidzidzo muThanatology. Kwaziso
Tricks kuva nezvipikiri refu